Fahantrana sy hetsi-bahoaka izao… | NewsMada
Fahantrana sy hetsi-bahoaka izao…
Ny fahantrana no mampihetsika ny vahoaka sa ny hetsi-bahoaka no mampahantrana? Arakaraka ny toerana ny valin’izay, ny fomba fijery, izay kendrena. Ny tsy azo lavina, mivemberina ny krizy sy ny hetsi-bahoaka, maharitra sy lalim-paka ny fahantrana. Inona ny tonga aloha? Na ny tena anton-javatra…
Ampanaovina fifidianana ny vahoaka, mamela ny mpitondra hiasa taona vitsivitsy na fe-potoam-piasana iray. Avy eo, miverina ny krizy: mihamahantra ny vahoaka. Mitombo harena ho azy ao amin’izany ny mpitondra sy izay akaiky azy. Izay no tsy mampilamina, mampidina vahoaka an-dalambe, manetsika azy…?
Soketaina ho manakorontana ny vahoaka, mampahantra amin’ny krizy miverimberina. Nefa izy aza, efa mahantra. Ny fahantrana no manesika sy manetsika azy. Ireo manararao-pahefana ho amin’ny tombontsoany no ho voatohintohina sy voakorontana, mamendrofendro hoe mampahantra ny hetsi-bahoaka?
Ekena ny voka-dratsin’ny hetsika lavareny: mampitotongana toekarena, sosialy, kolontsaina… Fihafiana sy fiaretana heveriny hitondra fiovana ho amin’ny fihatsaram-piainana. Saingy, mandiso fanantenana hatrany ny mpitondra: tsy mitana ny teny nomena, tsy mahatanteraka fanamby, manadino ny vahoaka…
Izay fomba ratsin’ny mpitondra izay no mampitroatra vahoaka? Ela nihafiana sy niaretana amin’ny fanamparam-pahefana, ny kolikoly, ny fampahantrana… Tsy efa voka-javatra ny hetsi-bahoaka fa anton-javatra ka ilazana hoe manakorontana sy mahatonga fahantrana? Tsy mahafa-bela eo amin’ny tantara…
Tsy hihetsika sy hanakorontana ve, ohatra, ny mpitondra, raha mampahantra azy sy ny fianakaviany, ohatra, ny fitantanam-panjakana? Am-po sy am-paosy mieritreritra. Samy tsy zava-baovao ny hoe hetsika sy fahantram-bahoaka. Mila dinihina lalina ary vahaolana ifotony, azo antoka sy maharitra amin’izay?
Amin’izao hoe fifidianana izao, mila tsinjovina dieny mialoha ny tsy hiverimberenan’ny krizy, na ny fampahantrana tsy hisian’ny hetsi-bahoaka. Hatramin’izao tsinona, mbola misy ny hetsika etsy sy eroa… Ho tonga hatraiza?